‘अक्टोपस’ लुइसलाई अनुबन्ध गर्न दुवै म्यानचेस्टरको रस्साकस्सी! | Hamro Khelkud
‘अक्टोपस’ लुइसलाई अनुबन्ध गर्न दुवै म्यानचेस्टरको रस्साकस्सी!
एजेन्सी – दुई इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड र म्यानचेस्टर सिटीले पोर्चुगिज क्लब बेन्फिकाका युवा डिफेन्सिभ मिडमिल्डर फ्लोरेन्टिनो लुईसलाई अनुबन्ध गर्ने तयारी थालेका छन् । उनको मिडफिल्डमा जताततै पुग्ने क्षमताले उनको उपनाम नै अक्टोपस रहन गएको छ ।
युनाइटेडका पल पोग्वा र चेल्सीका एङ्गोलो कान्टेसँग तुलना गर्न थालिएको २० वर्षीय युवा प्रतिभावान फ्लारेन्टिनोको सुरुवाती रिलिज क्लज ९० मिलियन पाउन्ड रहेको छ । लुइस पछिल्लो समय पोर्चुगिज लिग च्याम्पियन बेन्फिकाका महत्वपुर्ण खेलाडीको रुपमा रहेका छन् । बेन्फिका ‘बी’ बाट गत फेब्रुअरीमा सिनियर टोलीका छिरेका उनले त्यसयता लगातार उच्च प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
लुइसलाई अनुबन्ध गर्न दुई इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड र म्यानचेस्टर सिटीले रस्साकस्सी शुरु गरेको हो । सम्भवत उनी विन्टर ट्रान्सफरमा सरुवा हुन सक्नेछन् । सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले फ्लोरेन्टिनोलाई रोड्रिगो र भेट्रान फर्नाडिन्होको विकल्पमा रुपमा हेरेका छन् । यता, म्यानचेस्टर युनाइटेडले लुइसलाई पल पोग्वाकै विकल्पमा हेरेका छन् ।
पोग्बा लामो समयदेखि स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडको चासोको विषय बनेका छन् । अंगोलयिन मुलका फ्लोरेन्टिनोले पोर्चुगलको सिनियर टोलीबाट मात्रै खेल्न बाँकी छ । उनले पोर्चुगलको यू–१५ देखि यू–२० सम्मको उमेर समूहमा आफ्नो प्रतिभा देखाइसकेका छन् ।